hataru/हटारु: फाँटमा सिसिटिभी, कर्मचारी बाहिरै
अँ, त्यसपछि बरालले एक दिन सबै हाकिमलाई भेला पारेर भनेछन्, 'मैले एउटा कोठा तयार पार्न भनेको छु, माथिल्लो तलामा। तपाईहरु सबैलाई एउटै कोठामा बस्ने व्यवस्था हुन्छ। तास खेले पनि भयो, कुरा काटेर बसे पनि भयो।'
ऋचाजीको रिपोर्ट पढेपछि कर्मचारीका काम र गोबर लगाएको दाम्लोको याद आयो। 'सीसीटिभी'ले भ्याएनछ, 'बोतलटिभी' ल्याए काम गर्थे कि?
बाँकी 'नागरिक'बाट साभार गरिएको ऋचाजीको समाचारबाट है।
ऋचा अर्याल, काठमाडौ, चैत ३० - अन्य सरकारी अड्डाका तुलनामा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सर्वसाधारणको भिड बढी हुने गर्छ। त्यसमा पनि लाइसेन्स वितरण फाँट झनै व्यस्त हुनुपर्ने हो। तर, सोमबार कार्यालय समयमै पुग्दा पनि एकान्तकुनास्थित कोठाका सबैजसो कुर्सी खाली देखिन्थे। यसबारे बुझ्न फाँटका निमित्त प्रमुख बासु पोखरेललाई खोज्दा उनी आफैं पनि अनुपस्थित थिए।
'आजको मात्र कुरा होइन,' त्यतै भेटिएका एक व्यक्ति भन्दै थिए, 'हिजोआज यहाँ कर्मचारी भेटिन मुस्किल पर्छ।' कार्यालय स्रोतका अनुसार यसबारे माथिसम्मै गुनासो पुगेपछि श्रमतथा यातायात मन्त्रालयले पाँच दिनअघि यहाँ छड्के पनि गरेको थियो। छड्केमा आउनेले अधिकांश कर्मचारी अनुपस्थित रहेको रेकर्ड लिएर पनि गए। तर, त्यसको कुनै असर यहाँ परेको छैन, अहिले पनि कर्मचारी कार्यालयमा भेटिन्नन्। 'हाजिरी रजिस्टरले भने उनीहरू सधैं उपस्थित रहेको देखाउँछ,' ती कर्मचारीले भने। किन त? जानकारहरूका अनुसार कार्यसम्पादन व्यवस्थित गर्न कार्यालयमा सिसिटिभी जडान गरेदेखि यो समस्या सुरु भएको हो।
सवारीचालक अनुमति पत्र वितरण गर्दा गलत व्यक्तिको चयन नहोस् भनेर ट्रायल दिने स्थान रामशाहपथको नेसनल ट्रेडिङ र पुल्चोकस्थित साझा यातायातको परिसरमा गत साउनदेखि क्यामरा जडान गरिएको थियो। यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटले सिसिटिभी जडान गर्दा 'प्रयोगात्मक परीक्षा अझ मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी हुनुका साथै अब कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउँदै मानवीय त्रुटि र कमजोरी निरुत्साहित हुने' उल्लेख गरेको थियो। तर, भइदियो उल्टो।
सवारी अनुमति पत्रका निम्ति आवेदन दिएका परिक्षार्थी सिसिटिभी लगाएदेखि ठूलो संख्यामा अनुत्तीर्ण हुन थाले, कर्मचारीको मनोबल पनि उत्तिकै मात्रामा घट्न थाल्यो।
यो स्थिति धेरै दिन भने रहेन। कर्मचारीले काम गर्न छाड्ने मात्र नभई सिसिटिभी हटाउन चर्को दबाब दिनसमेत थाले। ती क्यामराले खिचेका दृश्य कसैले नहेर्ने गरेको थाहा पाएपछि भने कर्मचारीको व्यवहार पनि सामान्य हुन थाल्यो।
केही समययता कार्यालयको लाइसेन्स फाँटमा सिसिटिभी जडान गरेपछि भने समस्या फेरि बल्भि्कएको छ। क्यामरायुक्त कक्षमा कर्मचारी भेट्न मुस्किल छ।
'कार्यकक्षमा कर्मचारी नबसेको गुनासो सुनेर बारम्बार हेर्न जान्छौं,' यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडी भन्छन्, 'पुगेको एकैछिनमा उनीहरू कोठा-कोठामा देखिन थाल्छन्।' यसले कोठाबाट हराउने गरेका कर्मचारी कार्यालयको वरपरै बस्ने गरेको पुष्टि हुने संकेत उनी गर्छन्।
'क्यामरा जोडिएदेखि कोठामा हुने सबैखाले गतिविधि पारदर्शी भएकैले कर्मचारीलाई मर्का परेको छ,' कार्यालय आइरहने एक व्यक्तिले भने, 'त्यसैले हिजोआज कार्यालय कक्ष बाहिरै काम गर्न कर्मचारीले रुची देखाउने गरेका हुन्।'
कर्मचारीका यी गतिविधिलाई लाइसेन्स फाँटमा प्रमुख नहुनुले पनि सघाएको छ। निमित्त प्रमुख पोखरेल मातहत काम गर्ने अधिकृत र सहायक अधिकृत कसैले कसैलाई टेर्ने गरेका छैनन्, तलका कर्मचारीको अवस्था झनै बिजोग छ।
'यसबारे मन्त्रालयले नै अनुगमन गरेर काम अगाडि बढाइसकेको छ,' विभागका महानिर्देशक दवाडी भन्छन्, 'मन्त्रालयबाट खबर आउना साथ कारबाही सुरु हुन्छ।' विभागले पटकपटक सतर्क गराउँदा पनि कार्यालयका कर्मचारीले बेवास्ता गर्दै आएको उनी बताउँछन्।
महानिर्देशक दवाडीका अनुसार वागमती यातायात व्यवस्था कार्यालयको लाइसेन्स फाँटमा कर्मचारी बस्न छाडेपछि विभागबाट दुई कर्मचारी तुरुन्तै खटाउन निर्देशन दिइएको छ।
कार्यविधि मस्यौदा थन्कियो
क्यामरा जडान गरेपछि विभागले 'सिसिटिभी कार्यविधि मस्यौदा, ०६७' तयार पारेको थियो। जसअनुसार परीक्षार्थीले पाँच सेकेन्ड क्यामराअगाडि उभिएर फोटो खिचाएपछि मात्र उसको परीक्षा नियमानुसार अघि बढ्ने गर्थ्यो। त्यसलाई निश्चित प्रक्रिया र क्यामराले नै अनुगमन गर्ने भएकाले यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीको प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्ति भूमिका रहँदैनथ्यो।
यो मस्यौदा श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा राय प्रतिक्रियाका निम्ति पठाइएको थियो। तर भदौ अन्तिमतिर पठाइएको मस्यौदा अहिलेसम्म विभागमा फिर्ता नआएकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानेबारे विभाग अन्योलमा छ। सिसिटिभी लगाइसकेपछि त्यसलाई परिचालन गर्ने कार्यविधिले वैधानिकता नपाउँदा अव्यवस्था झांगिँदै गएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
'कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको भए, यस्तो अनियन्त्रित अवस्था हुने थिएन,' विभागका तत्कालीन निर्देशक अनिल गुरुङले भन्छन्, 'जुन उद्देश्यले राखिएको थियो, त्यस अनुसार अघि नबढ्दा विकृति मौलाउने मौका पाएको हो।'
Posted by Nabin Bibhas at 4:21 AM